Pyae Phyo (MMiTD): February 2013
Android User Guide Ebook 2013 ( Myanmar Version )7MB
ဆရာ ချစ်သောလူ ရေးသားတဲ့ Android User Guide မြန်မာလိုစာအုပ်လေးပါ...စာအုပ်ထဲမှာ ဖုန်းအမျိုးအစား
ပေါင်းများစွာအတွက် Root လုပ်နည်းလိုမျိုး.. အကြောင်းအရာများစွာကိုရေးသားထားပါတယ်...Android
ဖုန်းသမားများအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါ..စာမေးပွဲဖြေနေ
ချိန်မှာတောင် အများအကျိုးအတွက် ဒီစာအုပ်လေးကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့ အစ်ကိုဖြိုးဝေအောင်ကိုလည်း ဒီကနေ
တစ်ဆင့် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်မျာ...ဂုဏ်ထူးတွေ တစ်သီတစ်တန်းနဲ့ အောင်မြင်မှု
ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိပါစေခင်မျာ...ကဲ....စာရှုသူပရိတ်သတ်အပေါင်း...ဒေါင်းနိုင်ပါပြီခင်ဗျားးး :)
Download=>Solidfiles / Mediafire
အမျိုးအစား: Android , Ebook , Root
Bataria Pro - Battery Saver v1.30 For Android Phone & Tablet
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ နှစ်ရက်လုံးလုံး Android Application တွေချည်းဘဲတင်ပေးနေတော့ နည်းနည်းလေး
တော့ ငြီးငွေ့မသွားနဲ့ဦးနော်။ မနက်ဖြန်ကနေစပြီး PC Software အလန်းလေးတွေပြန်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။
အခုလည်း Android User တွေအတွက် Battery သက်တမ်းကို ပိုမိခံနိုင်ရည်ရှိစေမယ့် Application လေးတစ်
ခုထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Application တိုင်းကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းကြတာချည်းပါ
ဘဲ ကိုယ်တိုင်းစမ်းသုံးကြည့်ပြီးမှာ အကြိုက်တွေ့တာကို သုံကြပါနော်။ အသေးစိတ်ကိုလည်းအောက်မှာရှင်း
ပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Battery Saver v1.30 ကတော့လူသိနည်းပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်လေးကိုတင်ပေးထားတာပါနော်။
What's in this version : (Updated : Dec 10, 2012)
Task Manager - long press actions - added App Info
Task Manager - Services - added long press actions
CDBurnerXP 4.5.1 Build 3868 Portable (32/64)
CDBurnerXP ကိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ခွေကူးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်.. အသုံးပြုရတာလည်း သိပ်မခဲယဉ်းပါဘူး.. တော်တော်များများတော့သုံးကြပါတယ်.. အခု တင်ပေးလိုက်တာက CDBurnerXP 4.5.1 Build 3868 Portable ဆိုတော့ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းလည်းဖြစ်တယ်.. Portable လည်းဖြစ်တယ်.. သွားလေရာယူသွားနိုင်တယ်.. ခွေကူးချင်တာကို စက်ထဲက ခွေကူးတဲ့ဆော့ဝဲက အဆင်မပြေလို့ မကူးခဲ့ရဘူး မဖြစ်ရလေအောင် ဆောင်ထားသင့်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.. 32 အတွက်နဲ့ 64 အတွက် လိုချင်တာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်..
Key features of CDBurnerXP 4.5.1 Build 3868 Portable (x86/x64):
“Record all kinds of discs
“Record audio CDs withapause between tracks with or without
“Burn and create ISO-files
“Data verification after burning
“Create bootable discs
“Convert bin / nrg ISO, simple cover printing and much more!
“Operating systems: Windows 2000/XP/2003 Server / Vista / Windows 7
“Burn any Data on CD-R/CD-RW/DVD + R / DVD-R / DVD + RW / DVD-RW / DVD-RAM / BD / HD-DVD, including double layer mediums
“Burn mp3-CDs to store many audio files on one disc
“Verify written data automatically after burning
“To add your files, you can use either the internal or the intuitive Drop-Box to add from any Windows Explorer window
“Save your compilations for creation of backups
“Record on the fly, along with buffer underrun protection
“Import previous (ISO 9660) sessions and edit existing file structure on CD / DVD
“Quick and complete disk cleanup
“Copy data discs (possible copy-protection is not bypassed)
“Extract information about the drive and disk
“Create audio CDs from mp3, wav, ogg, flac and wma files
“The addition of one or multiple tracks from existing audio-CDs directly to your new compilation without ripping tracks before (add cda-files)
“Play audio-files with integrated audio player
“Audio-CDs supported gapless mode (disc-at-once)
“Import M3U or WPL playlists
“Import CUE sheet
“Creating mixed CDs
“ISO-write files to disk
“Create your own ISO-files
“Convert bin-and nrg-files to ISO
“Preservation of CD / DVD drive as ISO-file on the disk
“Simple cover printing feature for audio CDs and data discs
“Work from the command line
“Support most IDE, USB, Firewire and SCSI drives
“Option to enable access to drive for restricted users
Changes in 4.5.1.3868:
Added “-format” option with ISO for command line version
Fixed: Size of imported files is always 0.
Post Admin :မောင်ပေါက်
32bit Download Links: 5.5 MB
64bit Download Links: 5.6 MB
အမျိုးအစား: Burning Softwares , Software
Call Recorder Full v1.3.2 For Android Phone & Tablet
Call Recorder ကိုတော့လူတိုင်းသိကြမယ့် Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ မရှိသေးသောသူငယ်
ချင်းများနဲ့ Version အသစ်ကိုသုံးချင်သောသူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ မသိသေးတဲ့ User အသစ်များကို
နည်းနည်းလေးပြောပြရမယ်ဆိုရင် တဖက်လူနဲ့ဖုန်းစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ပြောသမျှအားလုံးကို
Record လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Record လုပ်ထားတဲ့ အသံဖိုင်ကလည်း ကြည်လင်တဲ့ Quality ကိုရရှိမှာ
ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ System Requirement ကတော့ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာသာ အသုံးပြုနိုင်
What's in this version: (Updated : Feb 22, 2013)
LG Nexus4support (root is required even for api recording)
Possibility to add one "/" to filename pattern
Sidebar Pro v2.5.2 For Android Phone & Tablet
Android User တွေအတွက် Application အလန်းလေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိသဘောကျတဲ့
ဒါမှမဟုတ် အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်နေတဲ့ Application တွေကို Screen ပေါ်မှာ Slide Bar ပုံစံလေးနဲ့စုထားလို့ရ
တဲ့ Application လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာပုံစံလေးကိုတော့ Screen Shoot ရိုက်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်
ဗျာ။ သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Feb-23 ရက်နေ့ကမှထွက်ထားတဲ့ Version အသစ်လေးပါ။
What's in this version : (Updated : Feb 23, 2013)
Revamped settings internally
Notification icon toggle (in settings)
Swipe Edge positioning and height changing!!!
Speed improvements have been made.
Widgets have been added and are working! Wifi-Bluetooth-Brightness-GPS-autorotate-Torch!
Support for devices with no flash
- See more at: http://ak-softwares.blogspot.com/2013/02/sidebar-pro-v252-android.html#sthash.Ef8s1JVD.dpuf
Photo Editor v2.0.3 For Android Phone & Tablet
ဓါတ်ပုံတွေကို အရင်တုန်းက Background တွေ Frame တွေ နဲ့အလှဆင်တာက ကွန်ပြူတာနဲ့အလှဆင်
တာပါ။ အခုအချိန်မှာ ဓါတ်ပုံတွေကို Android Phone နဲ့ Tablet တွေမှာပါ Edit လုပ်လို့ရပါပြီဗျာ။ ပုံမှာမြင်
ရတဲ့အတိုင်းဘဲ မိမိရဲ့ပုံလေးတွေကို ပိုပြီးလန်းသွားအောင်လို့ ပြင်နိုင်ပါတယ်။ Edit လုပ်နိုင်တဲ့ Design
တွေ Effect တွေ ကတော့ တော်တော်ကြီးကို များပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါ
တယ်နော်။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်မှာသာ အခု Application ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Photo Editor isaprofessional image processing app. No matter you areaprofessional oranovice, you can make amazing photo effects within less than one minute with this app.
Frame and scene
- See more at: http://ak-softwares.blogspot.com/2013/02/photo-editor-v203-android.html#sthash.dwOgTgCn.dpuf
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Editing
Netguide Journal Vol(2), Issue (75)
NetGuite ဂျာနယ်ကို ဒီအပတ်ကနေစတင်ပြီးအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
NetGuide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။
NetGuide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ NetGuide Journal Vol(2), Issue (75)ကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 27 ရက်နေ့ထွက်Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်
** Step-3. " SKIP AD ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Internet Accelerator - Donate v1.0 For Android Phone & Tablet
Android ဖုန်းနဲ့ Internet အသုံးပြုသူနဲ့ Wifi အသုံးပြုသူတွေအတွက် Application ကောင်းကောင်းလေးတစ်
ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် 4ရက်လောက်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့
အများကြီးကောင်းမလာပေမယ့် အတော်အသင့်တော့ သိသိသာသာလေးကောင်းလာပါတယ်ဗျာ။ဘာ
ဘဲပြောပြောဗျာ သာမန်ကွန်နရှင်ထက်တော့ပိုကောင်းလာပါတယ်။File Sizeကလည်းသေးသေးလေးနဲ့
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Speed ကိုမြှင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Start ဆိုပြီး
စိမ်းနေမှာပါ။ Stop ဆိုပြီး နီနေတာကတော့ ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Premium Account ဆိုတာ ဥပမာ Mediafire ကနေ 50MB ရှိတဲ့ဖိုင်တစ်ခုကို ပုံမှန်အတိုင်း ( Free Account )Download ယူမယ်ဆိုရင် မိနစ် ၂၀ ကြာမယ်ဘဲထား... Premium Account ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ၁၀ မိနစ်ဘဲ ကြာတော့မှာပါ.. ဒါကို Premium Account လို့ခေါ်ပါတယ်..
ယနေ့အတွက် Update လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်မျာ...
100 Working....... !
အမျိုးအစား: Premium Account
OfficeSuite Pro7(PDF & HD) Apk v7.0.1174 ( Android Application )
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Microsoft Office Files များ..PDF ဖိုင်များကို ကြည့်နိုင် ပြင်နိုင်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ.
Download=>ZippyShare / Mediafire
How OfficeSuite uses the granted permissions on your phone - http://www.mobisystems.com/android_o...ml#permissions
Armor for Android™ Security v1.0.30 Apk ( Android Application )
အသစ်ထွက် Android ဖုန်းများအတွက် Antivirus လေးပါ... Android ဖုန်းတိုင်း..ဖုန်းတိုင်းမှာ Antivirus တစ်ခုခု
ကတော့ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်..ထည့်ထားရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူး.. Virus မှန်သမျှကိုသတ်နိုင်အောင်
အမြဲ Virus Update လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်..ကြုံတုန်းသတိတစ်ခုပေးချင်တာက ဖုန်း Firmware ကိုဖျက်နိုင်
တဲ့ Virus တစ်မျိုးပေါ်ထွက်နေပါပြီ..ဒါကြောင့် Android ဖုန်းကိုင်သူများ အထူးသတိထားကြဖို့ ဒီနေရာကနေ
Armor for Android provides access to our huge, world-class HackerTrapp Cloud Antivirus Database, which contains data on over 1.2 million android apps and over 10,000 active android specific threats (viruses, malware, adware, trojans, and other apps exhibiting suspicious or harmful behavior.) We believe our HackerTrapp database housesamore comprehensive set of android specific threat definitions than any other AntiVirus app for Android. And that our extensive set of helpful tools in the Advanced Version is one-of-a-kind in the Android world. Unbeatable value!Utilizing our proprietary 0-click Total Mobile Safety technology and HackerTrapp database, your phone will be safe 24/7. Armor for Android™ will automatically protect your Android without slowing it down or draining your battery.
And coming soon (asaFREE update): Signal Booster for Android™, Cloud Backup for Android™, Cloud Restore for Android™, Phone Tracker for Android™, Ad Blocker for Android™, Number Whitelister/Blacklister for Android™, All “must have” features for your Android.
Special Introductory Sale Price! Get your copy now before the Sale Ends!
MX Player v1.7.11 For Android Phone & Tablet
Android အသုံးပြုသူတွေအတွက် Player ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ MX Player
လေးကတော့Video နဲ့ Audio Format တွေအားလုံးကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။DVD Format ကို
ကြည့်လို့ရတဲ့ Player ဆိုတာက Android OS မှာ ခပ်ရှားရှားပါဗျာ။ ရုပ်ထွက်လေးရောအသံလေးပါကောင်း
မွန်ပါတယ်ဗျာ။ အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ်။ လင့် ကလည်းသေသွားတယ်ဆိုပြီးထပ်တောင်းထားလို့
အခုနောက်ထပ် Version အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ ။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့
Free APK of Android MX Player Pro v1.7.11 full, you can download MX Player Pro .Apk Android 1.7.11 full free, download MX Player Pro for Android in format .Apk, MX Player Pro APK, full version of the application MX Player Pro .apk Android, Android APK MX Player Pro v1.7.11.
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Player
DX Battery Booster v1.3.9 For Android Phone & Tablet
Android OS User တွေအတွက် Application ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဘာအ
တွက်လည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့Android Phone နဲ့ Tablet တွေမှာ Battery ရဲ့ အသုံးပြုမှု
ခံနိုင်စွမ်းရည်ကို ပိုပြီးရေရှည်ခံနိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ Application လေးပါ။ Battery 20% ရောက်ရင်
ဖုန်းကို Auto ပိတ်ပေးပါတယ်။ 20% ဆိုတာကလည်း မိမိလိုသလို % ကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ပြီး
တော့နောက်ကွယ်က Run နေတဲ့ Application တွေကို ပိတ်ပေးနိုင်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါသေး
တယ်။ နောက်ဆုံး ထွက် Version လေးဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Every Android phone will like this app! Make your battery standby longer!
1. One key optimization: all the idle apps consuming your power will stop JUST BY ONE TOUCH!
2. Operating mode settings: select among Long Standby, Sleep Mode, General Mode or the customized mode as you need.
Your android phone will run in the way YOU want!
3. Power usage details for all applications and hardwares.
PLEASE add the DX Battery Saver Widget to homescreen!
With this widget, you will know the remaining time of your battery just by one glance, get into the homepage of DX Battery easily through the battery shape part, AND, try to press the green leaf, all the idle apps that consuming your power will stop! IT’S COOL!
All In One Booster v1.0 For Android Phone & Tablet
Android ဖုန်းတွေမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ All In One Booster v1.0 ဆိုတဲ့ Application လေးတစ်ခုမျှဝေ
ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးလည်းဆိုရင် အင်တာနက်လိုင်ဆွဲအား ၊
Wi-Fi လိုင်းဆွဲအား ၊ Battery ရေရှည်ခံနိုင်စေရန် ၊ Phone ခေါ်ဆိုမှုလိုင်းဆွဲအား ၊ Internet Download Speed
စတာတွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် Speed ကိုမြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း
ရပါတယ်။ Turn on Booster ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ အောက်မှာရေးပေး
You can findalot of high-end Android devices around the world that offerasuper-fast performance but sometime some files makesafew troubles in performance life that make itabit low such as bloatware and viruses, even some people also think that their Android devices don’t work very rapidly, they aren’t satisfy with the performance of their smartphone and tablet, out-dated Android versions also can be reason of slow performance, so what to do to get rid of with your Android device to get rid of low-speed bug? Buyanew device or anything else? Of course device replacement is notaeasy task that you can try, so you should acquire knowledge about something other to take yourself intoarest.
“All In One Booster Pro” is amazing app that can be proved very helpful in this situation, the app bumps up to 60% speed of your Android device, it does offerafaster speed in some important aspects such as battery, internet, signal, Wi-Fi, etc. The app makes some noticeable improvements.
Some people don’t overload their Android devices as they are afraid it would beareason of slow-speed but Android OS is known for amazing customization, you can find solutions for almost every problem you’re facing on your Android device like the but with All In One Booster PRO you would not be worried about the slow speed of your Android device.
So if you’re not satisfied with the speed of your Android device, give All In One Booster PROatry, the app cost nothing, it’s free, however the app contains ads but will care about them? Of course not, so head over to the below link to download the All In One Booster PRO for your Android smartphone and tablet.
MyanBrowser v1.7 For Android Phone & Tablet
Myanmar Android User များအတွက် မြန်မာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ Web Browser တစ်ခုမျှဝေပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Browser မှာရှာဖို့ Keyboard လည်းပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာစာ Font မရှိသော ဖုန်းများမှာ
ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Flash နဲ့ဆိုင်တဲ့ Web Page တွေကိုလည်း Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အ
[✔]MyanBrowser is an open-source browser for Android4and above.
[✔] Redefine and enhance for Tablet user.
[*] No need root user access.
[*] No need to change UI font.
[*] No need to install Zawgyi-One and WinInnwa font.
[*] Support input text display (Zawgyi-One font)
[*] Ads Free
- Unlimited tabs (switch by swiping right/left);
- Support most of the Myanmar website.
- Best Myanmar browser experience for Android 4.0 and above
For bugs report, you can email me at:
Love Baydin (အချစ်ဗေဒင်) For Android Phone & Tablet
ဒါလေးကတော့ပေါ့ပေါ့ပါး အပျော်တမ်း ဗေဒင် တွက်ပေးနိုင်တဲ့ Application လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်
ပါတယ်ဗျာ။ ဗေဒင်ကလည်း သာမန်ဗေဒင်တော့မဟုတ်ဘူးနော် အချစ်ဗေဒင်လေးဗျ ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအ
ပျော်တမ်း ဆိုပေမယ့် အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့နော်။ မိမိနဲ့ မိမိချစ်သူရဲ့ ရာသီဖွားတွေ ၊ စိတ်နေစိတ်
ထားတွေ ၊ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ရေး ကံကြမ္မာတွေကို တွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတွေစမ်းကြည့်
တာတော့ မှန်တယ်ပြောတယ်ဗျ ကျွန်တော်ကတော့တစ်ကိုယ်တည်းသမားမို့ မတွက်ကြည့်ဖူးပါဘူးဗျာ။
ဟားဟားဟားဟား ကြောငြာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ မစွံတာဗျ ။ ဘာဘဲပြောပြောဗျာ ကျွန်တော့် Application
လေးကြောင့် စိတ်ကြည်နူးမှုတစ်ခုရသွားတယ်ဆိုရင်တောင် ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ။ တင်ရကျိုးနပ်တာပေါ့။
Delta Force: Xtreme Full Version PC Game ( 290 MB )
စစ်တိုက်ရတာကို ၀ါသနာပါတဲ့ Gamer များအတွက် စစ်တိုက် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်...တောတောင် .. နှင်းတောင် တွေကြားထဲမှာ ရန်သူစစ်စခန်းများကို မိမိရဲ့အဖော် ကွန်မန်ဒိုသုံးယောက်ဖြင့် စုစုပေါင်းလေး
ယောက် ပေါင်းကာ လိုက်လံ နှိမ်နင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်...တောတွေ တောင်တွေထဲမှာ တိုက်ခိုက်ရတာဆို
တော့ တကယ့်ကိုဆော့လို့ကောင်းပြီး..မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်နေရသလိုခံစားရမှာပါ..Downoad
· OS: XP/Vista/7
· Video: 32MB
Download Setup=> Link 1 / Link 2
Serial Download=>Solidfiles / Tusfiles
SKIP လေးခါနှိပ်ခြင်းဖြင့် အားးပေးကြပါ :D
Guest Post By Blogger A.K.M
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၂၅.၂.၁၃) (၁၄) အမှတ် (၉)
လိုက်တာပါဗျာ။ အင်တာနက်ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Internet Journal
(၁၄) အမှတ် (၉) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 25 ရက်နေ့ထွက်Update လေးပါ။မိမိကြိုက်နှစ်သက်
တဲ့အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပြီး ဒေါင်းယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်ကို ၀ယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်မပြေသောနေ
Kaspersky Daily Activation Keys 26 February 2013 - Kaspersky Pure And Kaspersky 2013 Activation Keys Kav And Kis
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=====================Kaspersky Daily Activation Keys 26 February 2013 - Kaspersky Pure And Kaspersky 2013 Activation Keys Kav And Kis =====================>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Click3SKIP To Get Kaspersky Key :)
အမျိုးအစား: Kaspersky Key , Key / Crack / Patch
Wondershare Data Recovery v4.2.0.0 + Crack
akw: Wondershare video recoveryေ​လး လိုချင်လို့​​ပါ mp4 ဖို​င် ကို recover လုပ်လို့​​ရ​မ​ယ့်​
Cbox ကနေ တောင်းထားတာလေးတွေ့လို့ အခြားသောသူငယ်ချင်းတွေပါဒေါင်းယူနိုင်
အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တောင်းထားတဲ့ Bro ကတော့ Video Recovery လေးလို့
ပြောပါတယ်။ Wondershare Company က Video Recovery မထုတ်ပါဘူးဗျာ။ Data Recovery နဲ့
Converter Software တွေဘဲထုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခု တင်ပေးထားတဲ့ Wonder Share
Data Recovery ကလည်း Data တွေအပြင် Video File တွေကိုပါ Recovery လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထား
ပါတယ်။ အောက်မှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီတစ်လထဲမှာဘဲ Wondershare ကထုတ်
တဲ့ Software တွေကို တင်ပေးနေတာ 4မျိုးလောက်ရှိပြီဗျ။
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-93 (25.2.13)
နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဆိုဒ်မှာ အပတ်စဉ်တင်သွားပေးပါ့ မယ်ဗျာ။နောက်အပတ်များမှာလည်း အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-93 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 25 ရက်နေ့ထွက် Update
Mobile Care v2.0.1 For Android Phone & Tablet
Android Phone နဲ့ Tablet တွေမှာ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application လေးတစ်ခုမျှဝေ
ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မရှိမဖြစ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ပြောတာကို ပိုသွားပြီမထင်နဲ့နော်။ ကျွန်တော်စမ်းသုံး
ကြည့်ပြီးမှတော်တော်လေးကောင်းလို့ အာမခံရဲတာပါဗျာ။ ဒါလေးက လုပ်ဆောင်ချက်တွေတော်တော်စုံ
လင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါလေးကို Install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် Antivirus တောင်မလိုဘူးနော်။Virus တွေကိုစစ်
ပေးနိုင်တယ် ၊ နောက်ကွယ်က Autorun နေတဲ့ Application တွေကို ပိတ်ပေးနိုင်တယ် ၊ Battery ကို
လည်းရည်ရှည်ခံနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တယ် ၊ ပြီးတော့ Phone နဲ့ Game ကစားတဲ့သူတွေအတွက်
Game Speed ကို မြန်ဆန်စွာကစားနိုင်အောင် မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ Data တွေကို Backup/Respore
လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ ကိုယ်တိုင်သာစမ်းသုံးကြည့်ပါနော်။ ဒီထက်ပိုတဲ့ Features တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။
အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။
အလန်းဇယား! Live Wallpaper (Android Application - Myanmar Version )
မြန်မာ ဖုန်းပညာရှင်များက ရေးသားထုတ်လုပ်သော အလန်းဇယား! Live Wallpaper လေးဖြစ်ပါတယ်..ပေါ့
Guitar Pro6Full Version ( 27 MB )
Guitar Music သမားများအတွက် သံစဉ်တွေကိုလည်းတီးခတ်နိုင်သလို.သံစဉ်တေးသွား Note တွေကိုလည်း
ရှာဖွေရေးသားပေးနိုင်တဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်..တောင်းဆိုထားတဲ့အစ်ကိုအတွက် ပြန်တင်ပေး
လိုက်ပါပြီခင်မျာ.. Activate လုပ်ရင် Offline Mode အနေနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Full Version ဖြစ်အောင်
လုပ်နေချိန်မှာ Internet Connection ဖြုတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်မျာ..အဆင်ပြေပါစေ.
အမျိုးအစား: Music Editor
Beautiful Clock Widget Pro v1.7 ( Android Application )
မိမိတို့ရဲ့စက်ရုပ်ဖုန်းလေးမှာ ရောင်စုံနာရီလှလှလေးတွေနဲ့အလှဆင်ခြင်သူများအတွက်ပါ.. Connection ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲ Weather ကိုပြပေးနိုင်ပါသေးတယ်...မိန်းကလေးများအကြိုက်တွေ့ကြ
မှာပါ.. Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်မျာ.Android Version 2.0 နဲ့ 2.0 ရဲ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
ဖုန်းအမျိုးပေါင်း 1020 ကျော် Android versions 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2 ထိ Root လုပ်နိုင်တဲ့ Root Tool အသစ် (SRSRoot New FREE Root tool Version 4.0)
ဒီ Post လေးကိုတော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ရဲ့ Admin ကြီး ကိုပေါက် ဆီကနေမလာတာပါဗျာ
Android ဖုန်းတွေကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ Root လုပ်ကြပါတယ်။ Tool တွေကလဲတော်တော်စုံပါတယ်။ တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ UnlockRoot, SuperOneClick Root, OneClickRoot, S-Tool, M-Tool, ZhuoDaShi ------ စသည်ဖြင့်ရှိကြပါတယ်။ သူ့ဟာနဲ့သူလဲအဆင်ပြေကြပါတယ်။ တချို့ဖုန်းတွေကြတော့လည်း တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Root လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Flash လုပ်ကြ၊ CWM သွင်းကြလုပ်ကြရပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်တဲ့အပြင် အဆင်မသင့်ရင် Firmware တောင်ကျသွားတယ်။ တချို့ဆိုရင် BootLoader Unlock Code တောင်းရပါသေးတယ်။ ဒီတော့တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Root လုပ်လို့ရတဲ့ Tool လေးတွေကလူသုံးများပြီးပိုစိတ်ချရပါတယ်။ UnlockRoot
အမျိုးအစား: Android , Root
Facebook အသုံးပြုသူတိုင်း ဖတ်ပေးပါ အရေးကြီးပါတယ်။ သတိပြုသင့်သည့် facebook Worm Attack များ
သတိပြုသင့်သည့် facebook Worm Attack များ
ကျွန်တော့် Mail ထဲကို ၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပေးပို့ပြီး Website မှာတင်ပေး
ပါဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူပေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကလည်းကောင်းလို့ အားလုံးသတိ
ထားနိုင်အောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Forware Mail ကနေတဆင့်လာတာဆိုတော့ မူရင်းပိုင်ရှင်ကို
မသိလို့ Credit မပေးနိုင်တာကိုခွင့်လွတ်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲဗျာဘယ်လိုအချက်တွေကို
Website ၄၅ ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖတ်နိုင်မယ့် HWH v 2.2 ထွက်ပါပြီ
Website နဲ့ ဘလော့ပေါင်း (၄၅)ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို Android သုံးတဲ့ Device ပေါ်ကနေ တစ်ချက် ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ယခင် version 2.1 တုန်းက Website နဲ့ ဘလော့ (၃၇)ခု ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူတွေကိုလည်း အကြိုက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်.. အခုဗားရှင်းမှာတော့ ယခင်ဗားရှင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြုပြင်ပေးထားပြီး website နဲ့ ဘလော့ (၈)ခု ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါတယ်.. နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေး၊ သတင်း၊ သုတ စတဲ့ သုတ၊ ရသ စုံကို Update တစ်ချက်တည်းလုပ်ရုံနဲ့ ဖတ်နိုင်ပါပြီ.. စာမျက်နှာတွေကို website ကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး.. update လုပ်ပြီး connection ကို ဖြတ်တောက်ပြီး Offline
အနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. ဒါဆို ပိုက်ဆံလည်းကုန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့.. ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ website တွေ
Wise Disk Cleaner v7.76 Portable
Disk Cleaner ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Window System
နဲ့ Surf the Internet စတာတွေကို Scan ဖတ်ပြီး Clean လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Cleaner တွေကိုတော့
လူတိုင်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လို့ မရှင်းပြတော့ဘူးနော်။ အားလုံးအဆင်စေမယ့် Portable လေးဘဲတင်
အမျိုးအစား: Cleaner , Portable , Software
Windows တင်သည့် အခွေဖြင့် File များကို Backup လုပ်ခြင်း
တကယ်လို့ Windows Boot မတတ်တော့ဘူးဆိုရင် ပြဿနာကစတတ်တော့ဒါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင်
အထဲမှာ အရေးကြီး File တွေရှိသေးတယ်လေး။အဲ့ဒီ့ အချိန်မှာ Hard Disk ကိုပဲဖြုတ် တခြားစက်မှာတတ်
ပြီး File တွေကိုပြန်ယူရမလား ဒါမှမဟုတ် Live CD တွေပဲသုံးပြီး File တွေပြန်ယူရမလားလို့ စဉ်စားနေစရာ မလိုပါဘူး။Windows တင်တဲ့အခွေကို သုံးပြီး သင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ File တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ယူလို့ရ
အမျိုးအစား: Operating System Tricks and Tips
Windows Repair All In One v1.9.9
Gmail ထဲမှာ ဒီနေ့မနက်ကဘဲ အကိုတစ်ယောက်မေးထားလို့ ဒါလေးတင်ပေးလိုက်
ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာရဲ့ Window System တစ်ခုလုံးမှာ ရှိသမျှ Window Error တွေကိုဖြေရှင်းပေး
နိုင်တဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကလိတက်သူများဆောင်ထားသင့်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းက တော်တော်ကလိတယ်ဗျ ကလိလွန်းလို့ ခဏခဏလည်း Window ပြန်
တင်ရတယ်။ ဒါလေးကတော့ Window Error မှန်သမျှကို Repair လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်
ဗျာ Repair ပြန်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ Window တက်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ အသုံးပြုပုံကိုတော့အောက်မှာ ပုံ
အမျိုးအစား: Software , Window
DVD Movies တွေကို စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ EMDB v1.72 Portable
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးမယ့် Post လေးက ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ မတွေ့ဖူးသေး
ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ DVD Movies တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ဇတ်လမ်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးကြည့်ကြပါ
တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဇတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုစုစည်းပြီး ကြိုက်တဲ့ ဇတ်လမ်းကိုရွေးချယ်ကြည်ရှုနိုင်အောင်
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Language တွေကိုလည်းရွေးချယ်ပေးနိုင်
ပါတယ်ဗျာ။ English , Chinese , Japan အပါအ၀င်စုစုပေါင်းဘာသာစကား 24မျိုးထိပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ အား
လုံးသဘောကျစေမယ့် Portable Version လေးကိုဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်
How to Crash any computer or make Damage in windows ?
Notepad နဲ့ အပျော်တမ်း Virus ရေးနည်းလေးပြောပြမယ်နော်...မူရင်း အင်္ဂလိပ် Version အတိုင်းတင်ပေး
1- Shut down any computer for ever
အမျိုးအစား: Notepad Virus
Android User Guide Ebook 2013 ( Myanmar Version ) ...
Bataria Pro - Battery Saver v1.30 For Android Phon...
Call Recorder Full v1.3.2 For Android Phone & Tabl...
Internet Accelerator - Donate v1.0 For Android Pho...
OfficeSuite Pro7(PDF & HD) Apk v7.0.1174 ( Andro...
Armor for Android™ Security v1.0.30 Apk ( Android ...
DX Battery Booster v1.3.9 For Android Phone & Tab...
All In One Booster v1.0 For Android Phone & Tablet...
Love Baydin (အချစ်ဗေဒင်) For Android Phone & Table...
Delta Force: Xtreme Full Version PC Game ( 290 MB ...
Kaspersky Daily Activation Keys 26 February 2013 -...
အလန်းဇယား! Live Wallpaper (Android Application - M...
Beautiful Clock Widget Pro v1.7 ( Android Applicat...
Facebook အသုံးပြုသူတိုင်း ဖတ်ပေးပါ အရေးကြီးပါတယ်။ ...
Windows တင်သည့် အခွေဖြင့် File များကို Backup လုပ်...
DVD Movies တွေကို စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ EMDB v1.72 Por...
How to Crash any computer or make Damage in window...
iTune Gift Card Generator 2013 ( Not Available In ...
Huawei U8825D Root & Myanmar Font ထည့်နည်း(Bootloa...
Video နောက်ခံလှလှလေးတွေစုစည်းမှု - 4
Video နောက်ခံလှလှလေးတွေစုစည်းမှု -3
AVS Video Editor 6.3.1.231 Full Version + Patch
iGame-Capture Pro 1.0.2.21 Full
Internet Download Manager 6.15 Build3+ Patch (Fu...
Wondershare MobileGo 3.0.2.193 + Crack
Note2Clone Root လုပ်နည်းနှင့် Myanmar Font ထည့်န...
Windows PC မှာ Chrome OS ကို Run နည်း
Award Keylogger Pro 3.0
Easy Drive Data Recovery 3.0 + Registry Key
Revo Uninstaller Pro v3.0.1 (x86 & x64) + Crack
Android Applications & Games Selection Part-4
Huawei ဖုန်းတွေရဲ့ Unlock Code တွေကို Double Click...
လက်ရှိအချိန်မှာ Popular အဖြစ်ဆုံးနဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ A...
ZD Soft Screen Recorder 5.1 Full
Android Device လုံခြုံရေးအတွက်F-Secure Mobile Secu...
iPhone Backup Unlocker Pro2+ Crack
Android ပေါ်က Game တွေကို PC ပေါ်မှာ ကစားနိုင်တဲ့ Wi...
Easy DVD Player v3.5.1 Build 0833 + Serial
EaseUS Partition Master Professional Edition v9.2....
Blog မှာ Facebook Like Box ထည့်နည်း
Android Phone & Teblet မှာ ဘောလုံးကန်ဖို့ အတွက် Ne...
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၈.၂.၁၃) (၁၄) အမှတ် (၈)
Mobile Guide Journal Vol-1 , Issue-92 (18.2.13)
Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၄၂ (17.Feb.20...
Windows 8 မှာ .NET Framework 3.5 ကိုသွင်းနည်း
ပူဖောင်း ပုံစံ Social Media Sharing Widget
Photo Album Pro v1.0 For Android OS
Everyday Internet Guide (နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက်လမ်းညွှ...
Blogger တွေအတွက် Color Code Generator နောက်တစ်မျို...
Website Hosting ရှာနေသူများအတွက် Google Drive
Firefox OS ကို Windows PC မှာ Simulator ဖြင့်အသုံး...
Laptop ကွန်ပြူတာပြုပြင်နည်းနှင့်သိသင့်စရာများ (Ebo...
100% USB Virus Scan 2.4 Build 0827 + Serial
Speed Connect Internet Accelerator 8.0 + Crack
Best Android Update Apps Pack Feb 12, 2013
Valentine Day Theme For Android
ချစ်သူများနေ့လက်ဆောင် Valentine's Day themepack Fo...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေးစာအုပ်များ စုစည်...
Blog မှာ ပုံလေးတွကို Scroll ပုံစံလေးနဲ့ လုပ်မယ်။
Android Applications & Games Selection Part-3
Windows- 8 & 7.Loader.v2.7.4 DAZ
WinRAR 4.20 (32Bit & 64 Bit)
မြန်မာဘာသာပြန် နည်းပညာ Ebook ပေါင်း 200ကျော်
TuneUp Utilities 2013 v13.0.3020.7 Portable
အင်တာနက်ဂျာနယ် (၁၁.၂.၁၃) (၁၄) အမှတ် (၇)
Android ပေါ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘောလုံးပွဲတွေကို တိုက်...